अब बगैंचामै तरकारी खेती | गृहपृष्ठ
Home स्वास्थ्य र जीवनशैली अब बगैंचामै तरकारी खेती
तपाईंलाई बगैंचामा पनि तरकारी खेती गर्न सकिन्छ थाहै होला । तर, खेती गर्नुभएको पनि छ त ? अन्य तरकारी खेती गर्ने विधिभन्दा थोरै फरक भए पनि यो खासै गाह्रो काम भने होइन । यसका लागि तपाईंमा इच्छा शक्ति र केही समय भने हुनुपर्छ । शुरूमा तपाईंले आफ्नो बगैंचाको माटो कत्तिको उर्वर छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ । माटोको उर्वराशक्ति, अम्लीयपन आदिको मात्रा परीक्षणबाट जान्न सकिन्छ । साथै, सिजन र अफसिजनमा हुने तरकारी बालीको बारेमा पनि तपाईंलाई जानकारी हुनु आवश्यक छ । खेती गर्न मन लागेको तरकारीका लागि आफ्नो बगैंचा उपयुक्त छ/छैन भन्ने बुझेर मात्र काम थाल्नुपर्छ । साधारणतया बगैंचामा आलु, मुला, पुदिना, धनियाँ, खुर्सानी आदि लगाउन सकिन्छ । बगैंचामा तरकारी खेती गर्ने केही तरीका यहाँ दिइएको छ :
ठाउँ छनोट गर्नुहोस्
बगैंचामा तरकारी खेतीका लागि सकभर राम्रोसँग घाम लाग्ने ठाउँको छनोट गर्नुहोस् । यदि तपाईं धनिया, पुदिनालगायत पात प्रयोग गरिने बिरुवा लगाउँदै हुनुहुन्छ भने केही छाँया परेको तथा ओसिलो ठाउँ छनोट गर्नुपर्छ ।
तरकारी बालीको छनोट
ठाउँको छनोट गरिसकेपछि तपाईंलाई कति जग्गा आवश्यक पर्छ तथा के–के तरकारी लगाउने हो, निक्र्योल गर्नुपर्छ । पहिलोपटक बगैंचामा तरकारी लगाउँदै हुनुहुन्छ भने थोरै जग्गाको मात्र प्रयोग गर्नुहोस् । साथै, तपाईंसँग कुनै खुला जग्गा छैन भने गमलामै पनि तरकारी लगाउन सकिन्छ ।
गमलामा तरकारी बाली लगाउन सबैभन्दा पहिले त्यसको सफाइ गर्नुहोस् । त्यसपछि आवश्यकताअनुसारको माटो, मल तथा पानीको मात्रा मिलाएर तरकारीको बीउ रोप्न वा बेर्ना लगाउन सकिन्छ । साना गमलामा धेरै ठूलो बोट हुने वा धेरै जरा फैलने तरकारीबाट भने राम्रो उत्पादन लिन सकिन्न । त्यसैले, सोहीअनुसारको गमला तथा तरकारी बाली छनोट गरी खेती गर्नुहोस् । केही गमलामा सुगन्धित फूल पनि रोप्नुहोस् । यसो गर्दा बगैंचामा लगाइएका अन्य तरकारी बालीमा रोग÷कीरा लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ ।
कुनै पनि बालीबाट उत्पादन लिन त्यसलाई आवश्यक पर्ने मलखादबारे जान्नु जरुरी हुन्छ । बगैंचामा गरिने तरकारी खेतीमा पनि यही निमय लागू हुन्छ । तरकारीमा मलखादको प्रयोग कसरी र कुन बेला गर्ने भन्ने जानकारी कृषि भेनेरिनरी वा विभिन्न वेबसाइटबाट पनि पाउन सकिन्छ । राम्रोसँग मलखाद पुगेको बालीले उत्पादन पनि राम्रो दिन्छ ।
यदि तपाईंले गमलामा बाली लगाउनुभएको छ भने आफैले पानी दिन सकिन्छ । तर, बगैंचा ठूलो छ भने धेरै पानीको आवश्यकता पर्छ । तरकारी बालीमा समानुपातिक रूपले सिँचाइ गर्न फिरफिरे वा झारीको प्रयोग गर्न सकिन्छ, जुन कृषि सामग्री पसलमा सजिलै पाइन्छन् ।
A must read article! http://en.recidemia.com/5_Important_Facts_About_Proactol_Fat_Binder